Minimalist weekend: 10 casharro qaali ah | Abuurista khadka tooska ah
Toddobaadkan dhammaadka ah waxaan jeclaan lahaa inaan dib u eego adiga qaabka ugu yar asalkiisa, farsamooyinka iyo astaamaha bilicdeeda. Iskusoo wada duuboo, waxaa lagu gartaa iyadoo la siinayo qurux si fudud loo dheefshiido oo la jaleeco oo keliya. Mararka qaar shaashadda, dusha ama dhowr xariiq oo si xeeladeysan u qeexaya fikradda ayaa ku filan in lagu galo bilicsanaanta fudud (ee aan fududeyn) isla mar ahaantaana ay ka buuxaan waxyaabo kala duwan oo qiimo leh. Waa qaab maanta dunida maanta ka jira. Websaydhada, boorarka iyo dhammaan noocyada soo jeedinta muuqaalka ah. Taasi waa sababta aan u jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xulkan tobanka cashar ee ugu yar oo ay ku jiraan shaqooyin kala duwan (boodhadh xayeysiis ah, faylalka shaqada, bogagga shabakadaha, menusyada is-dhexgalka ...)
Qoraalladii hore dhibaatooyin ayaa ka jiray helitaanka xiriiriyeyaasha dibedda, haddii ay jiraan nooc kasta oo dhibaato ah, ha ka waaban inaad ka tagto faallo si aad u xalliso nooc kasta oo dhibaato ah. Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysatid iyaga waxayna u adeegaan inay ku dhiirigeliyaan oo ay ka shaqeeyaan farsamooyinkan dhab ahaantii kudarsanaya xarrago iyo adkaysi badan soo jeedimahayaga. Sidii aan horeyba kuugu sheegay marar badan, shaqada noocan ahi waa mid ku habboon in lala shaqeeyo haddii aan ku cusub nahay adduunka qaabeynta qaabdhismeedka. Hagaag, fudeydkeedu wuxuu muujin doonaa farsamooyin fudud iyo sababta oo ah ma jiraan waxyaabo badan ama waxyaalo aad u tiro badan iyo taas Qaab dhismeedkeeda curdinka ah maahan mid aad u baroque ah, waxaa jiri doona fursad aad u yar oo qaladaad lagu sameeyo.
Boosta fudud: pscs5.tumblr.com/post/33904739561
Sawirka filimka: cienel.net/photoshop-tutorials/create-a-representative-minimalist-movie-poster-in-photoshop
Boodhadh cajiib ah: www.photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/create-a-minimalist-portal-scene-in-photoshop/
Boosta xilliga dayrta: chaoticresources.tumblr.com/post/53258637141/how-to-make-a-minimalist-poster
Boodhadhka filimka: abduzeedo.com/minimalistic-poster-design-photoshop´
Bog fudud: www.techrepublic.com/blog/web-designer/tutorial-create-a-minimalist-web-design-layout-using-photoshop/
Bog fudud: sixrevisions.com/tutorials/photoshop-tutorials/create-a-slick-and-minimalist-web-layout-in-photoshop/
Minimalist menu: www.photoshopstar.com/graphics/easy-menu-in-minimalist-style/
Boodhadhka muusikada: www.taringa.net/posts/imagenes/12856087/Como-hacer-un-poster-minimalista-photoshop.html
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Toddobaadka dhammaadka Minimalist: 10 casharro sare
Runtii xiriiriyayaashu ma shaqeeyaan, waad hagaajin kartaa. Waad ku mahadsantahay horay.
Waad salaaman tahay Diana, kaliya waan badalay xiriiriyeyaasha, waxaan kudaray iskuxirka buuxa ee kuxiran xiriiriye kasta hadii duqsiyadu dhacaan. Waxaan rajeyneyaa inay tani ku caawin karto! Salaan iyo mahadsanid inaad na ogeysiisid.